iOS ၏ အသုံးဝင်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး AirDrop - iOS Banker Myanmar
iOS ၏ အသုံးဝင်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး AirDrop
AirDrop အကြောင်းကို ရေးချင်နေတာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ရှေးပဝေသဏီကထဲက ပါလာပြီးသား Feature ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတိုင်း သိရှိပြီး ဖြစ်နေကြမှာပဲ။ ငါရေးလည်း အပိုပဲ ဆိုပြီး စိတ်ထဲထင့်နေတာနဲ့ ပို့စ်အဖြစ် မထွက်လာခဲ့တာပါ။
အခုတော့ AirDrop အသုံးပြုပုံကို တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ ယူစာတွေ ရှိလာတဲ့အတွက် ဒီပို့စ်လေးကို တတ်သလောက်မှတ်သလောက်လေး ရေးပြီး တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
AirDrop အလုပ် လုပ်ပုံက နာမည်ကြီး App တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Zapya နဲ့ အတော်လေး ဆင်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Zapya ကို Andriod တွေ အပေါ်မှာ အသုံးပြုရတာ Performance ရော၊ Speed တွေရော ပိုမို ကောင်းမွန်လှပေမယ့် iOS အပေါ်မှာတော့ လုပ်ရတဲ့ အဆင့်အချို့ကြောင့် အနည်းငယ် အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။
ဒီတော့ iOS ရဲ့ Built-in ပါလာတဲ့ AirDrop ဟာ iDevice အသုံးပြုသူတွေကြားမှာတော့ အသုံးဝင်ဆုံးနဲအကောင်းဆုံးသောFeature တစ်ခုအဖြစ် AirDrop ဟာ ယနေ့ထိအတိုင် ပန်းပန်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
AirDrop ကို Setting >> General >> AirDrop ကို ဝင်ပြီး Everyone ကို ရွေးပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် AirDrop ကို Open လို့ ရပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းက သွားရတဲ့ အဆင့်တွေ ရှုပ်နေတယ်ဆိုရင် Control Center ကို ခေါ်လိုက်ပါ။ ပုံထဲက နေရာလေးကို ခပ်ကြာကြာ ခပ်တင်းတင်းလေး ဖိထားလိုက်ပါ။ 3D Touch မပါလည်း ဒီ Feature က အလုပ် လုပ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး Option လေး ပေါ်လာရင် AirDrop အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပေးလိုက် ရပါမယ်။
Drop ကို ပိတ်မလား ?
ဖုန်း Contacts ထဲက သူတွေကိုပဲ ပို့မလား ?
လူတိုင်းကိုပဲ ပို့မှာလား ?
( ဒီနေရာမှာ ရွေးပေး ရပါမယ်။ )
AirDrop အသုံးပြုပြီးလို့ ပြန်ပိတ်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ဒီနေရာကိုပဲ သွားရောက်ပြီး Receiving Off ကို ရွေးပြီး နှိပ်လိုက် ရပါမယ်။ ပို့ချင်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေထဲကို ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဘယ်ဖက်အောက်က Share ခလုတ်လေးဖြစ်တဲ့ မျှားအပေါ်ထောင်လေးကို နှိပ်လိုက် ရပါမယ်။
မိမိဖုန်းနဲ့ AirDrop ချိတ်ဆက်ထားရှိသည့် iDevice ရဲ့ နာမည်တွေ ဒီနေရာမှာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ 1 to 1 ချိတ်ပြီး Share တာက ပိုအဆင်ပြေ၊ ပိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ ပေါ်နေတဲ့ iDevice နာမည်ကို နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အခြားသော iDevice ပေါ်မှာ ဒီလိုမျိုး Comfirm Pop-up လေး တက်လာရင် Accept လုပ်ပေးလိုက် ရပါမယ်။ တစ်ဖက် Device ပေါ်ကလည်း Accept လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလျှင် အဆိုပါ AirDrop လုပ်ဆောင်မှုကို စတင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ iOS ရဲ့ Built-in အလန်းစား Feature ဖြစ်တဲ့ AirDrop ကို အသုံးပြုပုံ, အသုံးချပုံ နည်းလမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ဓါတ်ပုံ အမိုက်စားလေးတွေ ရိုက်ချင်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၁၆) ချက် Part (2)
Myat Thura - 10/23/2020
ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ဓါတ်ပုံ အမိုက်စားလေးတွေ ရိုက်ချင်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၁၆) ချက်
iPhone 12 Buying Guide
Myat Thura - 10/20/2020